बलिउड नायिका काजोल अब लेखिका पनि, के लेखिन् श्रीदेवीबारे? – Khabar Silo
बलिउड नायिका काजोल अब लेखिका पनि, के लेखिन् श्रीदेवीबारे?
बलिउड नायिका काजोल अब लेखिकाको पनि पहिचान बनाउन उद्धत भएकी छन्।उनले सहकर्मी श्रीदेवीका बारेमा लेखिएको पुस्तकको प्रस्तावना लेखेकी छन्।दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवीकाको बायोग्राफीमा आधारित ‘श्रीदेवी द इन्टरनल स्क्रिन गडेज’ को प्रस्तावना काजोलले लेखेकी हुन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ।
पुस्तकबारे काजोलले लेखेकी छन्, ‘म फिल्मको सेटमा श्रीदेवीको स्टारडम र ठूलो पर्दामा उनको जादू हेर्दै हुर्किएकी हुँ। उनी आफैंमा फिल्मको एक संस्था थिइन्। उनी सदैव मेरो फेवरेट रहनेछिन्।’
फेसबुकले ‘लाइक’ र ‘रियाक्सन’ संख्या हटाउँदै
तपाईं फेसबुकमा कुनै फोटा वा स्टाटस राख्नुहुन्छ। केही छिनपछि कति ‘लाइक’ वा ‘रियाक्सन’ आएछन् भनेर हेर्न थाल्नुहुन्छ। धेरै संख्या देखे दंग पर्नुहुन्छ। थोरै भए निराश।
तपाईं पनि यसमा पर्नुहुन्छ भने अब यी सबै झन्झटबाट चाँडै मुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ। फेसबुकले लाइक र रियाक्सनको संख्या नदेखाउने तयारी गरेको छ। र, यसको सुरूआत अष्ट्रेलियाबाट भएको छ।शुक्रबारदेखि अष्ट्रेलियाका फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना फोटा वा स्टाटसमा कति जनाले लाइक र रियाक्सन गरे भनेर हेर्न नपाउने भएका छन्। यसअघि नै अष्ट्रेलियाका प्रयोगकर्ताहरूको इन्स्टाग्रामबाट यो सुविधा हटिसकेको छ।
फेसबुकले केही समययता यो कामको परीक्षण गरिरहेको थियो। केही देशमा जुलाईबाटै लागू भएको यो परिवर्तन विवादास्पद पनि भइरहेको थियो। तर फेसबुकले कुनै पनि ‘पोष्ट’बाट लाइक संख्या हटाउनु भनेको प्रयोगकर्तामा सामाजिक चाप कम गर्ने एउटा प्रयास भएको बताएको छ।फेसबुक अष्ट्रेलियाका प्रवक्ता मिया गार्लिकले यसबारे भनेका छन्, ‘लाइक र रियाक्सनको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि मानिसहरूले उनीहरूबीचको अन्तर्क्रियाको गुणस्तरका साथै ‘कन्टेन्ट’ गुणस्तरमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।’
लाइक र रियाक्सनको प्रतिस्पर्धाले युवा वर्गहरूको मानसिक स्वास्थमा हानी पुग्न गएको र अनावश्यक दवाव पर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।गार्लिकले थप भनेका छन्, ‘कम्पनीले मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू र एन्टी बुलिङ समूहसँग यस विषयमा छलफल गरेको थियो। प्राविधिक विज्ञहरूले पनि यो पूर्वानुमान गरेका थिए।’
यो परिवर्तनबारे केहीले भने ठीक नभएको प्रतिक्रिया छ दिएका छन्। उनीहरूले लाइक संख्या उनीहरूको व्यवसाय लागि महत्वपूर्ण छ भन्दै आएका छन्।फेसबुकको यो परीक्षणलाई निरन्तरता दिएर स्थायी बनाइन्छ वा हटाइन्छ भन्नेबारे कम्पनीले कुनै जानकारी दिएको छैन।
सलमानले निर्देशन दिए, सोनाक्षीले घटाइन् तौल
काठमाडौं– बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ३२ वर्षकी भएकी छिन् । २ जुन १९८७ मा मुम्बईमा जन्मिएकी सोनाक्षीले पहिले त अभिनयमा लाग्छु भन्ने सोचेकै थिइनन् । तर, सन् २०१० मा उनले सलमान खानको फिल्म दबंगबाट बलिउडमा इन्ट्री गरिन् । त्यति बेला उनको तौल ९० किलो थियो । सलमान खानले उनलाई तौल घटाउन निर्देशन दिएका थिए । […]
आँचलले श्रीमानसँग मिलेर फिल्म बनाउँदै, नायकमा पल शाह ?
Posted on July 6, 2021 July 6, 2021 Author khabar silo
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सुन्दरीहरु विबाह लगत्तै चलचित्र क्षेत्रबाट पलायत हुँदै आएको परिप्रेक्षमा नायिका आचल शर्मा भने विबाहपछि पनि जम्ने संकेत देखाएकी छिन् । उनी नायिका मात्र नभइ अब निर्मात्री बन्ने तयारी गरेकी छन ।निर्देशक मिलन चाम्सले गर्ने तयारी उनीहरुले गरेका छन् । चलचित्रलाई विशेष बनाउने तयारीमा आँचल र उदिप विबाह लगत्तै कोरोना कहर सुरुभएपछि चलचित्रमा […]
श्रीमानले हानेर टा’उको फु’टाइदिए, छोरी र मलाई लिन त्यो दिन देखि कहिल्यै आएनन, गायिका मधु छेत्री
Posted on May 17, 2021 Author khabar silo
मधु क्षेत्री र टिका सानु नेपाली लोकदोहोरीका लागि परिचित नाम हो । उनीहरुले गाएका थुप्रै गीतहरु हिट छन । टिका पुन खासगरी लाइभ दोहोरीका लागि बढि चर्चित छन्, मधु भने सोचे झै जिन्दगी रैनछ भन्ने गीतवाट धेरैले चिन्न सक्छन् । धमलाको हमला कार्यक्रममा पुगेका उनीहरुले निकै रमाइलो गरेका छन् । टिका सानुले धमलाको कार्यक्रममा दोस्रो […]
आज २०७६ असोज ११ गते शनिबारको राशिफल
एउटा फिल्मको २० लाख लिने गरेकी छु